Xiaomi Mi Mix 2S: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း Androidsis
Xiaomi Mi Mix 2S သည်လက်တွေ့ဘ ၀ တစ်ခုဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးတော့နေ့ရောက်လာပြီ။ Xiaomi ၏ပထမဆုံးအဆင့်မြင့် Xiaomi ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပြသလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောမယ် Xiaomi က Mi ရောသမ 2S။ ကျနော်တို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အချို့အသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြရသောတစ် ဦး ကဖုန်း။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့သူကတရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ 2018 ခုနှစ်၏တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမအဆင့်မြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်အမှတ်အသားပြုထားသောဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုအချို့နှင့် ၎င်းသည်အစွမ်းထက်။ အရည်အသွေးရှိသောဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင်ဘောင်များမရှိဘဲမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းအတွက်ဘောင်များထပ်မံထင်ရှားလာသည်။ Xiaomi Mi Mix 2S မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။
ဒီတင်ပြချက်ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့ပြီးသားကိုသိနိုင်ပါပြီ high-end device ကိုအပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များ။ ဒီတော့ဒီဖုန်းကငါတို့အတွက်ဘာအံ့သြစရာမှမရှိတော့ဘူး။ ပြီးတော့ဘာမှစိတ်ပျက်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ Xiaomi သည်အရည်အသွေးကောင်းသောဖုန်းကိုထပ်မံပေးသည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများစွာသည်၎င်းကိုမြင်ပြီးနောက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာရှိသည် ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာထစ်မရှိပါ။ ရှေ့ကင်မရာကိုစက်၏အောက်ခြေတွင်ထပ်မံတပ်ဆင်ထားသည်။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Xiaomi Mi Mix 2S
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Xiaomi Mi Mix 2S
ဒီတင်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီပစ္စည်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ။ ဤရွေ့ကား Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ:
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Xiaomi Mi Mix 2S
ပုံစံ Mi 2S ရောထွေး
operating system MIUI 8.0 ဖြင့် Android 9.5 Oreo
ဖန်သားပြင် IPS ၅.၉၉ လက်မ Full HD + resolution နှင့် 5.99: 18 အချိုးအစားရှိသည်
Processor ကို အမြင့်ဆုံး 845 GHz အမြန်နှုန်းရှိသော Core ရှစ်ခုပါရှိသော Qualcomm Snapdragon 2.8
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 GB ကို / GB ကို 128 / 256 GB အထိ
နောက်ကင်မရာ 12 MP Sony IMX363 aperturef/ 1.8 နှင့် 12 MP Samsung S5K3M3 နှင့် aperturef/ 2.4 တို့ပါဝင်သည်။
ရှေ့ကင်မရာf/5aperture နှင့် AI Face ID ပါသော 2.0 MP
ဆက်သွယ်မှု NFC GSM LTE-FDD LTE-TDD WDCMA TD-SCMA Bluetooth 5.0 USB အမျိုးအစား C
အခြားအင်္ဂါရပ်များ နောက်လက်ဗွေဖတ်စက် AI Face ID မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းကင်မရာမှချက်ချင်းဘာသာပြန်ဆိုခြင်း Virtual assistant
ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အတူ 3.400 mAh
ရှုထောင့် 150.86 x ကို 74.9 x ကို 8.1mm
ငါတို့မြင်နိုင်တယ် Xiaomi သည်ဤစက်ပစ္စည်းနှင့်ပါဝါလောင်းနိုင်သည်။ Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာရှိနေခြင်းသည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းအတွက်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်စက်မဖွင့်ခင်ငါတို့သိပြီးသားအရာတစ်ခုပါ အတုထောက်လှမ်းရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါလိမ့်မယ် ဖုန်းကင်မရာများ ထို့ကြောင့် Xiaomi Mi MIX 2S ကဲ့သို့ဤကင်မရာများမှများစွာမျှော်လင့်ရသည် ထို့အပြင်ကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့်လောင်းနိုင်သည် နောက်ကျောမှာ။ ကျယ်ပြန့်သောထောင့်နှင့်တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူး။
ဉာဏ်ရည်တုအတုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းသည်စွမ်းနိုင်လိမ့်မည် အကောင်းဆုံးဖမ်းယူများအတွက်မြင်ကွင်းများကို detect အချိန်တိုင်း။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်တွင်အလွန်ကောင်းသောပုံတူပုံရိပ်ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မြင်ကွင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရုံသာမက၎င်းတွင်ပါရှိလိမ့်မည် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါအရာဝတ္ထုတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်စွမ်း။ ၎င်းသည်သင်ရိုက်ကူးနေသည့်အရာ ၀ တ္ထုကိုသူကမည်သို့အာရုံစိုက်ရမည်ကိုသိရန်သို့မဟုတ်နောက်ခံအားမှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ လူသိများတဲ့ bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ.
ထို့အပြင်ဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာတွေ့မည်ဖြစ်သည် အနှေးလှုပ်ရှားမှု တိုးတက်လာသောFull HD တွင် 120 fps နှင့် 240 fps နှုန်းဖြင့် 720p resolution ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းဒါကိုတွေ့နိုင်တယ် တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ကင်မရာဖြင့်ရင်ဘတ်ကိုဆွဲထုတ်နေသည်။ ယမန်နှစ်မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းစာလျှင်၎င်းသည်ယုတ္တိရှိပုံရသည်။ ထို့အပြင် HEVC –Figh Efficiency Video Codec format ဖြင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောစွမ်းရည်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်တစ် ဦး Xiaomi Mi Mix 2S ၏ရှေ့ကင်မရာရှိမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်။ ၎င်းသည် AI Face ID ၏အမည်အောက်တွင်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်လည်းရွေးချယ်စရာရှိသည်။ သော်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖုန်းပေါ်မှာရှေ့ကင်မရာ၏အနေအထားကိုယူပြီး, ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊
အရွယ်အစားအရမော်ဒယ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖုန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၀ င်ရိုးတစ်ခုထက်မီလီမီတာပိုမိုကြီးမားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အနည်းငယ်ပိုမိုလေးသောအလေးချိန်ရှိပြီး၎င်းမော်ဒယ်သည် ၆ ဂရမ်ပိုလေးသည်။ ဒီတော့ခြားနားချက်များဤအမှု၌အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ကြသည်။
ဖြစ်ရပ်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနောက်တစ်ခုမှာထိုအရာဖြစ်သည် Xiaomi Mi Mix 2S သည်ဂူဂဲလ်၏တိုးပွားလာသောအမှန်တရားကိုအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ဖုန်းကအထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မယ် Arcore။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီရွေးချယ်စရာရှိသည့်စျေးကွက်ထဲမှဖုန်းအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ထို့အပြင်လူမီနီယံနှင့်ကြွေထည်ကိုယ်ထည်ရှိသောကိရိယာ၏ဒီဇိုင်းသည်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ်စနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကွိုးစားအားထုတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ အထူးသကျွန်တော်တစ် ဦး ကိုရှာပါ လူမီနီယံကိုယ်ထည်နှင့်ကြွေထည်ကိုယ်ထည် ဒီကိရိယာပေါ်မှာ။
တယ်လီဖုန်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သိထားရန်အလွန်အရေးကြီးသောကဏ္ aspects နှစ်ခုရှိသည်။ The Xiaomi Mi Mix 2S ၏စျေးနှုန်းနှင့်စျေးကွက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်မည့်နေ့ရက်နှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ မနေ့ကပဲကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်။ ငါမှန်တယ်?
စျေးကွက်ထဲတွင်မတူညီသောဗားရှင်းများရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာ6GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှု, အခြား6GB နှင့် 128 GB သိုလှောင်မှုနှင့်အတူနောက်ဆုံးတစ်ခု 8 GB နှင့် 256 GB ကိုသိုလှောင်မှုနှင့်အတူတစ် ဦး ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားစျေးနှုန်းရပါလိမ့်မယ်။
El Xiaomi Mi Mix 2S သည် 6GB + 64GB နှင့်အတူ (၃၂၉၉ ယွမ်) ဖြင့်ရောင်းချမည် 420 ယူရို)
Xiaomi က Mi Mix 2S ကို6GB + 128 GB ဖြင့်အစားထိုးမည် ၈,၄၄၇ ယွမ် (ယူရို ၄၅၉ ခန့်)
Xiaomi Mi Mix 2s သည် 8 GB RAM နှင့် 256 GB ရှိသည် သိုလှောင်မှုမှာစျေးနှုန်းလိမ့်မည် ၈,၄၄၇ ယွမ် (ယူရို ၅၀၉ ခန့်) တွင်အခမဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ပါဝင်သည်
ဖုန်းကိုAprilပြီလ ၃ ရက်မှစတင်ရောင်းချမည်။ အခြားအရောင်များရှိနိုင်သော်လည်းယခုလက်ရှိအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi Mi Mix 2S သည်လက်တွေ့ဘ ၀ တစ်ခုဖြစ်သည်
Roberto Cacho Martinez ဟုသူကပြောသည်
Androidsis သူငယ်ချင်း… Full HD လား၊
Roberto Cacho Martinez အားပြန်ကြားပါ